Fiberglass rebar အကြောင်း Blog - GFRP Rebar
ဒီနေရာတွင်ဖိုက်ဘာမှန် fittings နှင့်မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေနှင့် ပတ်သက်. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်အသုံးဝင်သောဆောင်းပါးတွေကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
Fiberglass Rebar ဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
ကွန်ကရစ်အဆောက်အ ဦ များ၏ကြီးမားသောပမာဏသည်ယိုယွင်းပျက်စီးနေသည်။ ၄ င်းတို့၏သမာဓိနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်အတွက်ချက်ချင်းအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။ မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်များအတွင်းပျက်စီးသွားသောအရာဝတ္ထုများသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလိုအပ်ကြောင်းထင်ရှားလာခဲ့သည်။ ပြုပြင်ခြင်းသည်အကုန်အကျများသော်လည်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိုမိုများပြားသည်ကို ၀ န်ခံရမည်။
စာဖတ်ခြင်း Continue "ဖန်မျှင်မှန်ဘီလူးဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း"
ကွန်ကရစ်အဆောက်အ ဦ များတွင်ဖိုက်ဘာမှန်အားဖြည့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများပိုမိုလိုအပ်လာပြီးအဓိကစားသုံးသူဖြစ်လာသည်။ ဖွဲ့စည်းမှုကိုလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ် ၈၀ ပြည့်နှစ်များတွင်စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြသောကြောင့်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဆောက်လုပ်သူများသည်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အသုံးပြုသောဤပစ္စည်းအသစ်များကိုယုံကြည်လာကြသည်။ ယခင်နှစ်များ၌သိပ္ပံနှင့်…
စာဖတ်ခြင်း Continue “ ကွန်ကရစ်ဆောက်လုပ်ရေးတွင်ဖိုက်ဘာမှန်အားဖြည့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်း”
အထူးသဖြင့်ဆောင်းရာသီတွင်ကားရပ်နားသောနေရာများတွင်ကားဂိုဒေါင်များသည်ဝန်ထုပ်ပိုများစေသည်။ အကြောင်းပြချက်ကြောင့်, icing တားဆီးသောဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကြောင့်သူတို့ပစ္စည်းတက်ကြွစွာဖျက်ဆီး။ ဤအခြေအနေကိုရှောင်ရှားရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းရှိသည်။ ပစ္စည်းအသစ်များကွန်ကရစ်ကျောက်တုံးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကားဂိုဒေါင်များတွင် element များပါဝင်သည်။ ကော်လံများ၊ ပန်းကန်များ၊ ထုပ်။ ကွန်ကရစ်ဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်
စာဖတ်ခြင်း Continue “ ကားရပ်နားရန်နေရာများတပ်ဆင်ရန်ဖိုက်ဘာမှန်အရက်ဆိုင်များအသုံးပြုခြင်း”
ဖန်မျှင်ထည်များအသုံးပြုခြင်း၏ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၁၉၅၆ ခုနှစ်ကဖြစ်သည်။ မက်ဆာချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်သည်ပိုလီမာဖိုက်ဘာမှန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအိမ်တစ်လုံးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Disneyland ပန်းခြံရှိဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ အခြားဆွဲဆောင်မှုဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်အထိအိမ်သည် ၁၀ နှစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
စာဖတ်ခြင်း Continue "GFRP သံဘောင်များကိုအသုံးပြုမှုကမ္ဘာ့ဖလားအတွေ့အကြုံကို"
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအခြေခံအုတ်မြစ်များကိုအားဖြည့်ပေးရန် GFRP rebar ကိုအသုံးပြုသည်။ Fiberglass rebar ကိုအထပ် ၄ ထပ်အထက်ရှိအဆောက်အအုံများတွင်ချွတ်ခြင်းနှင့်ပြားချပ်ချပ်နှစ်ခုလုံးအတွက်လက်ခံနိုင်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။ အစင်းဖောင်ဒေးရှင်းတွင် GFRP rebar အသုံးပြုမှုဥပမာတစ်ခုကိုဗီဒီယိုတွင်ပြထားသည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းအားဖြည့်ရန်အတွက်ပေါင်းစပ်သံဘောင်များရွေးချယ်မှုသည်…
စာဖတ်ခြင်း Continue "ဟုအဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်အသုံးပြုရသံဘောင်များကိုဖိုက်ဘာမှန်နိုင်သလား?"
basalt သံဘောင်များနှင့် GFRP သံဘောင်များအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
Basalt Rebar နှင့် Fiberglass Rebar နှစ်ခုစလုံးသည်ပေါင်းစပ်အားဖြည့်ခြင်းအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတူတူပင်ဖြစ်၏ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာ basalt fiber နှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ glass fiber ဖြစ်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအရ, basalt rebar နှင့် GFRP အရက်ဆိုင်များအကြားတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။
စာဖတ်ခြင်း Continue "ဘာ basalt သံဘောင်များနှင့် GFRP သံဘောင်များအကြားကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်?"